कुटिएको छ मान्छे, लुटिएको छ मान्छे स्पन्दनलाई टुक्राएर, आशाहरु भत्काएर खुला आकाश मुनि, बाच्न विवश छ मान्छे !! धर्तिको एक टुक्रा भूगोल, प्रकृतिको अनुपम उपहार सगरमाथाको शिर पाएर पनि, निहुरिन विवाश छ मान्छे !! धर्ति माताको छाती चुस्दै, ब्वासाहरुले मुखमा रगत लतपताएर फोस्रो भाषणमा चिच्याउँदा पनि, कान छोपी सुन्न विवश…
View More कविता: विवश मान्छे
health साहित्य साहित्य कला/मनोरन्जन
Sahas September 29, 2020	No Comments
काठमाडौँ। विश्व मुटु दिवसका अवसरमा मंगलबार ‘टन्सिलले बिगारेको मुटु’ कृति सार्वजनिक गरिएको छ । कृतिमा समाजका अपहेलित र छायामा परेका विपन्न वर्गका बालबालिकाको मुद्दालाई उठाउने प्रयास गरिएको छ । बाथ–मुटु रोगीका विविध पक्षलाई रसिलो र सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएको कृति नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित गरिएको हो। डा प्रकाशराज…
View More ‘टन्सिलले बिगारेको मुटु’ सार्वजनिक
बिर्तामोड । नेपाली साहित्य परिषद झापाले राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । परिषदका अध्यक्ष देवेन्द्रकिशोर ढुंगानाले मंगलबार शोक वक्तव्य जारी गर्दै जनप्रिय स्रष्टा घिमिरेको निधनले स्तब्ध भएको बताएका छन् । ‘महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटापछिका सर्वाधिक जनप्रिय स्रष्टा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको मंगलवार साँझ ५:५५ बजे उहाँकै निवासमा स्वर्गारोहण भएको…
View More राष्ट्रकविको निधनप्रति नेपाली साहित्य परिषदद्वारा शोक ब्यक्त
View More कविता : रातो मान्छे र मौन
मेरो परेवा – कविता
चन्द्रमणि पन्थ बार्दलीमा ट्वाल्ल परेर खै! के सोचीरहेको छ प्वाख भएर पनि, प्वाख काटिएको जस्तो खुल्ला आकाश भएपनि छेकबार लगाए जस्तो ऊ ऊड्न खोज्दैन मैले सोचे मेरो परेवालाई सन्चो छैन उसको डाक्टर म बन्न खोजे तर, मनै रोगी रहेछु उसका बाटाहरु बन्द गरेर स्वतन्त्रताहरु हनन् गरेर आकाशमा उडेको हेर्न चाहानु…
View More मेरो परेवा – कविता